လူတိုင်း ထီပေါက်ချင် ကြတယ်.. ဒီနည်း ကို မသုံးကြ လို့ မပေါက် ကြသေး တာပါ…. – Shwe Thoon 8 Online Media
လူတိုင်း ထီပေါက်ချင် ကြတယ်.. ဒီနည်း ကို မသုံးကြ လို့ မပေါက် ကြသေး တာပါ….
July 31, 2020 July 31, 2020 shwe0Comments
…အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာ တော်…။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာကို တင်ပေး လိုက် ပါတယ် အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ မင်္ဂလာပါ သူဌေး မင်းထီဆိုင်ကြီးမှ ကူးယူ ဖော်ပြအပ် ပါသည်။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်း တစောင်မှာ ဖော်ပြ ထားပြီး အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပါယ်အတိုချုပ်က…“ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ရှိစဉ်ကေ ကာဏ္ဍဝေန မထေရ်ကြီးသည် ပထမ စာရေး တံမဲကို အမြဲတမ်း ပေါက်ခဲ့၏ ထို့အတူ ကျွန်ုပ်သည်လည်းဤသို့ ဖြစ်ရပါစေ သတည်း” ဟု ဆိုထားပါတယ်။ ရှေးဟောင်း ပေစာ တစ်ခုထဲ မှာလည်း ဒီဂါထာ ရဲ့ အစွမ်းကို အထူး အစွမ်း ထက်မြက်ကြောင်း ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ် အခုဂါထာကို မိတ်ဆွေတွေ အတွက် စေတနာရှေ့ထားလို့ ဖော်ပြပေးလိုက် ရပါတယ်။
ဂါထာကို မဖော်ပြမီမှာ အရင်ဆုံး ထီပေါက်ချင်တယ် ဆို ရင် သင်ဟာ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာရဲ့သီလကို ဆောက်တည်ရပါ လိမ့်မယ်။ ဂါထာမန္တန်တွေရဲ့ အစွမ်းဆိုတာ ရွတ်ဖတ်နိုင်မှု အစွမ်း၊ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား စိတ်စွမ်းအားတို့ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အစွမ်းထက်မြက်မှုက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူဘဲ ပိုနိုင်၊ လျှော့နိုင်တာ ရှိပါတယ်။
ဒီဂါထာကို သင်ဟာ ရွတ်ဖတ်ပြီး ထီပေါက် ချင်တယ် ဆိုရင် လိုက်နာရမယ့် အချက်တွေတော့ ရှိပါတယ် လွယ်လွယ်တော့ မရနိုင်ပါဘူး။
လိုက်နာရမယ့် ၃ ချက်က-
၁။ ဒီဂါထာကို တစ်နေ့ အနည်းဆုံး ၁၀၈ လုံးပုတီး တစ်ပတ် ရအောင် စိပ်ရပါလိမ့်မယ်။ နေ့စဉ် မပျက်မကွက် စိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ပုတီးမစိပ်မှီမှာ မြတ်စွာဘုရားသခင် ရှေ့မှာ သီလကို ဦးဆုံး ဆောက်တည်ပါ။
၃။ နောက်ဆုံး အချက်ကတော့ ဒီဂါထာကို နေ့စဉ် မှန်မှန် စိပ်သွားပြီး လစဉ် ထီထိုးပေးပါက ၆ လအတွင်း ထီပေါက်နိုင်ပါတယ်။
“ဧတဒဂ္ဂံ ဘိက္ခဝေ မမ သာဝကာနံဘိက္ခူနံ ပထမံ သလာကံဂဏုန္တာနံ ယဒိဒံ ကောဏ္ဍဓာနောဧတေန သစ္စ ဝဇ္ဆေ ဧဝံမေဟောတု” ရှားပါးပြီ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဂါထာ တစ်ပုဒ်ပါ အာလုံးပဲ ထီပေါက်ကံကို ဆွတ်ခူးနိုင်ကြပါစေ သိန်းဆုတွေ ပေါက်ကြပါစေ ။
အမျိုးတစ်ယောက် ကတော့ ဒီဂါထာရွတ်ပြီး သိန်းဆု အမှန် တကယ် ပေါက်သွား တာကြောင့် ဒီဂါထာကို ဖော်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
crd : apannpyay
လူတိုင်း ထီပေါက်ချင် ကြတယ်.. ဒီနည်း ကို မသုံးကြ လို့ မပေါက် ကြသေး တာပါ
အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာ တော်…။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာကို တင်ပေး လိုက် ပါတယ် အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ မင်္ဂလာပါ သူဌေး မင်းထီဆိုင်ကြီးမှ ကူးယူ ဖော်ပြအပ် ပါသည်။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်း တစောင်မှာ ဖော်ပြ ထားပြီး အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာ ဖြစ်ပါတယ်။
← ပိတ်ရက် လေးရက်အတွင်း ဧရာဝတီတိုင်း က ကမ်းခြေတွေကို မလာကြဖို့အမိန့်ထုတ် ….
ဇာတ်ရံဆိုပြီး အနှိမ်ခံရလို့ ခေါင်းဆောင် မင်းသမီး အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တော့မည့် ယွန်းရွှေရည် …. →